Inona no tena fototry ny fikarohana momba ny teny malaza amin'ny Amazon?
Mihevitra aho fa ny fikarohana fototra amin'ny teny malaza amin'ny Amazon dia voafaritra indrindra noho ny antony ifantohan'ny teny filamatra (amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fangatahan'ny fikarohana nataon'ny mpampiasa), ary ny ambaratonga misy amin'izao fotoana izao ny fifaninanana (ho sarotra ny hamaritra azy). Mety ho toy ny tsy misy mpitaingina izy io, fa ny tanjona lehibe amin'ny fikaroka teny fototra momba ny Amazon dia ny hahita ireo mety ho azonao nefa mbola tsy fanta-daza amin'ny vokatra sy ny lavabato ampiasain'ireo mpivarotra mivarotra mividy any. Fa ahoana kosa ny fandrosoana fandrosoana mora kokoa mba hijerena ny helo toy ny helo ny sangan'asanao amin'ny aterineto?
Misy fomba roa ahafahanao miara-miasa aminy:
Fikarohana asa fikarohana ho an'ny proactive amin'ny fampiasana safidy Amazon auto-fill. Amin'izany fomba izany, tsy afaka mahazo sary maimaim-poana avy amin'ny sombim-pifaneraseran'ny teny filamatra mahomby amin'ny famaritana vokatra vokarin'ny vokatra ianao na zavatra iray voatokana samirery, fa azony kosa ny dikan'ny fikarohana karoka fidirana ao an-toerana. auto-soso-kevitra ny algorithm Amazon - buy real uk passport.
Mamantatra ireo teny manan-danja indrindra. Midika ireo teny fikarohana ireo aho miaraka amin'ny volavolan-dahatsary mitongilana, nefa mbola tsy dia mifaninana loatra. Izany no antony mahatonga ny mety ho mbola tsy ampy ny vokatra azo ifandraisany amin'ny fivarotana izay voasokajy ho an'ity tenimiafina manokana ity amin'izao fotoana izao. Vokatr'izany dia mety ho lasa laharam-pahamehana laharam-pahamehana ho an'ny fikarohana fototra amin'ny Amazon.
Mitadiava teny fohy mahazatra ankehitriny izay mahazo ny laza. Nalaina tamin'ny ankapobeny, ny teny fanalahidy malaza dia tsy lavitra loatra ny fifaninanana, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Fa ny tombony farany amin'ny volavolam-pikarakarana (ohatra, tamin'ny volana lasa) dia mahatonga azy ireny ho marim-pototra ho heverina ho anisan'ny taratra voalohany tsy maintsy mandresy amin'ny fikarohana fototra ataonao amin'ny Amazon.
Ankoatra ny teny fanalahidy mahasoa sy ny famolavolana finday lavabe, ny lisitry ny lisitry ny mpivarotra sy ny fanatsarana azy dia zava-dehibe ihany koa. Midika izany fa tsara ho anao ny fananana dobo filaminana mahasoa. Fa ny fividianana tsy misy rafitra famokarana lisitra famokarana dia tsy azo ihodivirana hamono ny orinasa ecommerce amin'ny fotoana. Izany no antony tokony hahitanao antoka fa tsy misy mametra ny fijerin'ny lisitra amin'ny fikarohana an-tserasera. Ny fanaovana izany, dia manoro hevitra aho amin'ny fanaraha-maso indroa amin'ireto sori-dàlana manaraka ireto izay mamaritra ny fampidiram-bola mahomby amin'ny Amazon::
Ny famaritana vokatra vokatra dia tokony hosoratana any amin'ny toerana manodidina eo ho eo amin'ny 250 teny tokony haverina miaraka amin'ny lisitry ny dimy bala-teboka, isaky ny mamaky tanteraka nefa mbola madio sy mendrika.
Tena sarobidy koa ny sarin'ny vokatra. Ary tsy ho hitarika ny mpitsidika anao fotsiny amin'ny fanapahan-kevitra farany hividy miaraka aminao, fa ho an'ny tanjona mpikaroka ihany koa. Ny zavatra dia ny fahafantaran'i Amazona ny votoaty amin'ny votoatin'ny fanohanana ho toy ny singa mitovy fiantraikany amin'ny famokarana ny vokatrao.